လူဦးရေ ၅ဝဝဝ ကျော်ပါဝင်သည့် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ် မြို့ကြီး ၁ မြို့တွင်ြ?? - Yangon Media Group
လူဦးရေ ၅ဝဝဝ ကျော်ပါဝင်သည့် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ် မြို့ကြီး ၁ မြို့တွင်ြ??
ပုဂံ၊ မတ် ၂၄
လူဦးရေ ၅ဝဝဝ ကျော်ပါဝင်သည့် ”သန့်ရှင်းခေတ် မီရှေ့သို့ချီ” စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတစ် ဝန်းရှိ မြို့ကြီး ၁၈ မြို့တွင် မတ် ၂၄ ရက်က တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) သည်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပရဟိတအဖွဲ့များနှင့်ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရန် ကုန်မြို့အတွင်းရှိ ရွှေတိဂုံစေတီ တော်ဘုရားရင်ပြင်၊ ညောင်ဦးမြို့အ တွင်းရှိ ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ၊ပုသိမ်မြို့အတွင်းရှိ ချောင်းသာကမ်းခြေ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့အတွင်းရှိဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနားလမ်းတစ် လျှောက်၊ ထားဝယ်မြို့အတွင်းရှိ လောကမာရဇိန်ဘုရားကြီးဝင်း စသည့်နေရာများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း(MPT) ၏ဥပဒေနှင့် ညှိနှိုင်းရေးရာဌာနမှလက်ထောက်အထွေအထွေ မန်နေဂျာဦးမိုးသူရက ”သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်လာဖို့ အမှိုက်စနစ်တကျစွန့် ပစ်တဲ့ အလေ့အထကိုလိုက်နာကျင့် သုံးလာနိုင်အောင် အဲဒီအလေ့အထတွေကို လူတွေသတိပြုလာနိုင် အောင် ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေမှာ လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက် သလို တခြားတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည် နယ် ၁၄ ခုမှာရှိတဲ့မြို့ကြီး ၁၈ မြို့ မှာလည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံမှာကဒေသ ခံပြည်သူတွေ ညောင်ဦးခရိုင်အ ထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ ကြက် ခြေနီ၊ အရန်မီးသတ်တွေပူးပေါင်းပါ ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ လူအင် အား ၁ဝဝဝ လောက်ပါဝင်မယ်လို့ မှန်းထားပေမယ့် ကျော်လွန်ပြီး ၁၅ဝဝ လောက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင် လူအင်အား ၅ဝဝဝ ကျော် ၆ဝဝဝ လောက်ပါဝင်မယ်လို့ မှန်းထားပါ တယ်”ဟု မတ် ၂၄ ရက်က ပုဂံရှေး ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ၌ ကျင်း ပပြုလုပ်သည့် ”သန့်ရှင်းခေတ်မီ ရှေ့သို့ချီ” စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေး လှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားတွင် ပြော သည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အထောက်အပံ့ဖြစ် စေမည့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယင်းလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများအတွက်သုံး နှစ်တာကာလအတွင်း ငွေကျပ် သန်းပေါင်း ၄၅ဝဝ ကျော်သုံးစွဲခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ပုဂံပလတ်စတစ်ကမ်းပိန်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဦးတင့်ဆွေက ”ကျွန်တော်တို့ဒေသက ထူးခြားတဲ့ ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ၊ ပြည်သားအားလုံးကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အထူးအ လေးပေးပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့အလေ့ အထဖြစ်အောင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုတယ်”ဟုပြောသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ”သန့်ရှင်းခေတ်မီရှေ့ သို့ချီ” စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးလှုပ် ရှားမှုအစီအစဉ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒဂုံ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦး၊ နေပြည်တော်ဇမ္ဗူသီရိ၊ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး မုံရွာ၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးတွက် မကွေးမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)ရှိ ပဲခူး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)ရှိ ပြည်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီး နား၊ ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်၊ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံ၊ ချင်းပြည်နယ် ဟားခါး၊ မွန်ပြည်နယ် မော်လ မြိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့) ကျိုင်းတု၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက် ပိုင်း)တွင် လားရှိုး စသည့်မြို့များ တွင် သန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်သို့ လာနေသည့် ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ၁၄ ဦးကို မင်းတုန်းမြို့နယ်တွင် ဖမ်းမိ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်း တစ်နှစ်ကျော် အတွင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်
ယခုလအတွင်းပြုလုပ်မည့် ‘နှင်းဆီနယ်နိမိတ်’အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲကို ရုပ်သံလိုင်းများမှ တိုက်ရိ?